Xidhiika dilkiisa iyo fankiisa: M.Mooge. (A.H.N) – Kaydka Xogaha Dahsoon Iyo Xaqiiqooyinka Foolaad.com
HomeSOOYAALXidhiika dilkiisa iyo fankiisa: M.Mooge. (A.H.N)
muj.maxamed mooge liiban Baben
Iyada oo taasi jirto, ayaa subaxaas annaga oo halkii shaaha ku cabbayna waxaa isla kaaya soo taagay nin la odhan jirey Xasan Tarabi, oo markaas abaan-duulle ka ahaa ciidankii degennaa Xerda Gubadaalaco; oo ahaa aaga dhexe ee ku aadan Burco. Iyada oo xaalku sidaas yahay, ayaa isla markaa waxaa soo dhacay war sheegayaa ‘In habeenkaas 4/6/1984 uu Taliyihii Ciidanka SNM ee Ibrahim Koodbuur, oo fadhigiisu ahaa Kaam Abokor uu siiyey baabuurkiisii iyo ilaaladiisi khaaska ahayd nin la odhan jirey Ina Askar, oo ahaa sarkaal ka mid ahaa SNM, isla markaana ahaa ragga aad u khalaaweeya oo rag badanna u ahaa Sheekh!!. (Ninkaasi maaha Kornayl Cabdillahi Askar) Baabuurkii taliyaha, ilaaladiisii iyo Wadaadkii Ina Askar oo ku socday habeenkaas Ramaso, waxaa Jabhad ka tirsan taliskii Ciidanka Siyaad Barre ka heshay meel la yidhaahdo Celiyo, waxay laayeen ciidankii ilaalada ahaa iyo sarkaalkii inna Askar, baabuurkiina waxaa la geeyey Hargaysa.
Shafshafo: waa dawayn iyo baanin qofka dhaawacma lala gaadho. Haddaba kolkii uu Maxamed dhaawacmay, shafshafo ayaa lala rebay oo, waaba tan ilaa dhagax-buur in loola cararro la doonnaayay. Saw cajaa’ib maaha kolkaas in 12-sano ka dib uu midhahaas uu qaaday sabab u eeg uu ku baxay M. Mooge…..
…”Maxamed Mooge, gaadhi Land Crusser ah oo Toyota ah, oo noocii hore ee ‘Siible qafasle ah’ ayay saarnaayeen isaga iyo nin. Ragga kale waxaa wehelisay gabadh Faadumo la odhan jiray, oo iyaduna la socotay, halkaas ayaa ambush/jidgoyn loogu galay, waxaana u galay dadkii halganka dhabarka kala dagaallamayay. Dadka dilay oo ka koobnaa oday iyo wiilal uu dhalay iyo qaraabadiisa, waxay daba socdeen aannooyin la buunbuuniyey oo cadowgii ka faa’iidaystay.
Xigasho Amb Salmaan Ibraahim Xuseen